एकैदिन २२६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १७९८ पुग्यो ! - Sagarmatha Online News Portal
एकैदिन २२६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १७९८ पुग्यो !
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय २६ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार २ सय १३ जना पुरुष र १३ जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा ११ महिने शिशु समेत छन् ।
दैलेखमा ४१ जना संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरूमध्ये नारायण नगरपालिकाका २५ जना छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा १७ देखि ३५ वर्षका ९ जना र सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा १० देखि ३६ वर्षका १६ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
दुल्लु नगरपालिकाका ७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा २३ र ३० वर्षकी दुई महिला छन् भने २ वर्षका बालकदेखि ३९ वर्षका पुरुष छन् ।
सल्यानका १० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरु वनगाढ कुपिण्डेका २० देखि ४० वर्षका पुरुष हुन् ।
सुर्खेत बराहतालका ५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु २० देखि २६ वर्षका छन् ।
धनुषामा ७ जना संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरु मध्ये धनौजीका ४ जना छन् । उनीहरु १८ देखि ३२ वर्षका छन् । हंशपुरका २ जना १९ र २० वर्षका पुरुष र प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत २१ वर्षीय पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सख्ंया १७९८ पुगेको छ । उनीहरु मध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय २१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।